Maxaad u samayn kartaa jacayl dartii? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, ANYA JAMESON
ANYA IYO DUNCAN
Amiiradda boqortooyada Japan ee Mako ayaa ku dhawaaqday in ay is mehersanayaan nin dadka caadiga ah ka mid ah, waxayna diyaar u tahay in ay lumiso mansabkeeda boqortooyada.
Tan waxa ay keenaysaa su'aasha ah illee intee in la'eg ayaan ayaan diyaar u nahay in aan jacayl dartiis u lumino waxyaabaha wanaagsan ee aan haysano, maxaanse jacayl dartiis u samayn karnaa?
Markii dambe waxa ay go'aan ku gaartay in ay gurigooda isaga tagto si ay Duncan ula dhisato xiriir waara. Waxaa soo qabtay reerkeeda, kuwaas oo sida ay aaminsantahay siiyay dawo suuxisa.
"Duncan ayaa i weeydiiyay in aan ugu dhaarto in isaga dartiis aanan reerkeena u burburin haynin, waxaanse u sheegay in isaga kaliya uusan ahayn sababta aan reerka uga cararayo, balse reerka aan wax xoriyad ah ka waayay, sidaasi oo ay tahay uu isaga qeyb ka yahay sababta" ayay tiri Anya.
"Waxay iigu gooddin jireen in ay i dilayaan, iyaguna is dilayaan maadaamaa ay sheegeen in aan ceeb usoo jiiday" ayay tiri Anya oo markii dambe inta baxsatay magangalyo ahaan u gashay safaaradda UK ee Bangaladesh.
" Waxaan degnay meeshii ugu horaysay oo guri noo noqon kartay, 10 sanno ayaan ku noolnahay, waxaanan ku dhalnay saddex caruur ah" ayay tiri Anya.
Xigashada Sawirka, PNICHA KERDPHOL
PNICHA IYO LEE
"Waxaan kusoo koray magaalada Bangkok, waxaan lahaa darawalo iyo jaariyado aniga i daryeela" ayay gabadhan u sheegtay BBCda , waxayna intaas ku dartay in nolosheeda ay ahayd mid raaxo ah.
Pnicha waxa ay sheegtay in dadka ay aad ula yaabeen go'aankeeda ah in ay jacayl la wadaagto Lee, kana tagto nolosheedii heerka sare ahayd.
"Tani ma ahan sheeko ku saabsan gabadh kale oo qoys faqri ah kasoo jeedda oo guursatay nin taajir ah oo reer galbeed ah, qisadayda aad ayay oga duwantahay" ayay tiri gabadhan.
Aada ayay ugu faraxsantahay in ay go'aankeeda ku adkaysatay, meeshii uu qalbigeeda jeclaana ay raacday.
Xigashada Sawirka, DANIELA PAIEWONSKY
Natasha ayay talo ku caddaatay, waxayna go'aansatay ay usoo wareegto jamhuuriyadda Dominican si ay ninkeeda isku meel ugu wada noolaadaan.
Kadib 16 sano oo ay is qabeen, islamarkaasna isu dhaleen saddex caruur ah, Natasha iyo Fidias waxa ay go'aan ku gaareen in ay is furaan kadib markii ay nolosha isku fahmi waayeen.
Maxay dadka Masar 'Habaarkii meydka Fircoon' ula xiriirinayaan shilkii tareenka iyo Suweys?
Maxaa lagu ciqaabi doonaa askarigii dilay Geroge Floyd?
Waa kuma Maxamed Kaka, wiilka uu dhalay Idriss Deby, ee xilka la wareegay?